Su'aalaha La Weydiiyo - Quanzhou Dambiisha Ugaarsiga Cusub & Shandadaha Co., Ltd.
Waxaan nahay warshad leh khadadka caatada ah pls sidoo kale waxaan leenahay xarumo ganacsi oo noo gaar ah! Xaaladdan oo kale, waxaan si karti leh ugu shaqeyn karnaa si toos ah iyada oo aan khalad laga fahmin macaamiisheenna.
Ma heli karaa muunad?
Haa dabcan .
Haddii aad dooneysid muunad markii hore aan ka haysanno shirkadeena, waxay noqon kartaa bilaash oo xamuulka ayaa lagaa qaadi doonaa.
Haddii muunada la soo saarayo iyadoo lagu saleynayo nashqaddaada iwm, waan hubin doonnaa qiimaha maaddada iwm oo waan ku soo wargelin doonnaa, haddii walxahaas aan horay ugu haysannay warshad, shaybaarku caadi ahaan waa bilaash. Haddii sheygu yahay mid qaas ah oo lacag badan la soo dalaco, kiiskan, waanu kula soo diri doonnaa si aan u aragno sida loo xaliyo khidmadaha muunadda oo ka sii fiican.
Waa maxay waqtiga shaqada ee tusaalaha?
Caadi ahaan 7-10 maalmood waxay kuxirantahay qaabka aad dhigato.
Maxaad sameysaa si aad u xakameyso tayada nooc kasta oo shandado ah (Tusaale ahaan / Soo saar ballaaran)?
a) Tusaale: * hubinta qaabka warqadda oo faahfaahsan; * raadinta dharka & gogosha si loo waafajiyo naqshadeynta; * Tijaabinta qaababka tolida; * baarista muunadda ugu dambeysa kooxda si loo arko haddii wax kale loo baahan yahay in la hagaajiyo ka hor inta aan loo dirin macaamiisha.
* Hagaajinta heerka imtixaanka kaliya maahan waxqabadka boorsada laakiin sidoo kale falanqaynta qaybaha kiimikada ee ku saleysan suuqyada macaamiisheena, ku wargalinta macaamiisheena ogolaanshahooda ugu dambeeya
b) Amarada soosaarayaasha badan: kuna saleysan howlgalka heerka tusaalaha, dhammaan faahfaahinta iyo su'aalaha sida caadiga ah waxaa xalliya macaamiisha iyo annaga. waxaan raaci doonnaa qorshaha wax soosaarka si aan u hubino in wax soo saarka badan uu ku dhacay waqtiga! Inta lagu jiro wax soo saarka, haddii ay dhacdo, waxaan ku wargalin doonnaa macaamiisheenna si aan u hubinno inay haystaan ​​waqti ay ku xaqiijiyaan ama ay horay ugu xalliyaan dhibaatada.
Ma haysaa buug catelog ah oo aad xilli kasta bixin karto?
Haa, waxaan leenahay naqshadeeye u gaar ah, waxaan naqshadeynaa oo horumarinaa noocyo kala duwan oo bac ah xilli ciyaareed kasta si aan ula kulano moodada casriga ah.
Catelogue sanad kasta nuskiisa oo noocyo kala duwan oo jawaano ah gudaha ku jiraan! fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay noo e-catelogue.
Sidee loo sameeyaa haddii aanan gaari karin MOQ?
Waxaan haynaa habab kala duwan oo aan kuugu soo jeedinno tixraacaaga. waxaan rajeyneynaa in mid kastoo ka mid ah ay dhici karto inay noqoto sida aad u maleyneyso in caawinaad badan aad ugu dhaqaaqeyso amarrada. Tusaale ahaan: Sida caadiga ah sababta aadan ula kulmi karin MOQ-daadu waa inaad leedahay naqshad kuu gaar ah laakiin ma gaari kartid MOQ si aan u ballansanno dharka iyo gogolyada iwm. Haddii ay sidaas tahay, waxaan isku dayi doonnaa inaan soo jeedino qaar ka mid ah dharka ama gogosha si loo arko haddii ay dhici karto inay si fiican kula kulanto. ama, haddii tiradaadu ay tahay dhawr xabbadood 30-50pcs, waxaan soo jeedin doonnaa keydkeenna, oo sidoo kale leh tayo wanaagsan laakiin qiimo macquul ah, muuqaal mood ah xilli ciyaareedkiiba. Waxaan lahaan doonnaa maareeyahayaga xirfadeed si aan ugala hadalno su'aalaha nooca dambe goor dambe haddii aad hesho emaylkaaga.
Miyaad macaamili kartaa astaanta?
Haa, sanadwalba waxaan soosaaranaa noocyo kaladuwan. Macaamiil badan ayaa dooran kara naqshadeynta boorsadeena laakiin calaamadeysan astaankooda waa ganacsi noocan oo kale ah oo aan marwalba ka shaqeyno
Waa maxay nooca shuruudaha lacag bixinta ee aad aqbasho?
Debaajiga T / T. D / P D / A GUDDIGA MIDNIMADA GALBEED Waxay noqon kartaa mid discus ah.
Waa maxay dammaanaddaada alaabtu?
Waxaan leenahay nidaam xakameyn tayo leh oo adag, waxaanan leenahay farsamo yaqaan xirfadle ah oo aan kula soo xiriirno, aruurinta tirooyinkaaga iibka kadib, xaaladdan waxaan si fiican u fahmi karnaa dhinacyada aan wali ku xoogannahay oo aan kula tartami karno suuqa, iyo dhinaca aan wali u baahanahay hagaajin. Waxaan wajihi doonnaa wax dhibaato ah iyo dhibaato ka dib iibka mar aad nala soo xiriirto, HALIS MALAHAN SAAFIDO KA DIB.